I-Fomo: Khulisa Ukuguqulwa Ngobufakazi Bomphakathi | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJuni 19, i-2018 NgoMsombuluko, Novemba 22, 2021 Douglas Karr
Noma ngubani osebenza esikhaleni se-ecommerce uzokutshela ukuthi into enkulu kakhulu ekunqobeni ukuthenga akuyona intengo, ukuthembana. Ukuthenga esizeni esisha sokuthenga kuthatha ukweqa kokholo kumthengi ongakaze athenge kusayithi phambilini.
Izinkomba zokuthembela njenge-SSL enwetshiwe, ukuqapha ukuphepha komuntu wesithathu, nezilinganiso nokubuyekezwa konke kubalulekile kumasayithi ezentengiselwano ngoba ahlinzeka umthengi ngomqondo wokuthi basebenzisana nenkampani enhle ezokwenzela isithembiso sayo. Kukhona okuningi ongakwenza, noma kunjalo!
I-Fomo iyilingana eliku-inthanethi lesitolo esimatasa, eletha ubufakazi bezenhlalo kubo bonke abavakashela isiza sakho. Lobu bufakazi bezenhlalo buvame ukukhuphula ukuguqulwa ngo-40 kuye ku-200%, okushintsha umdlalo kunoma yisiphi isitolo esiku-inthanethi. Nasi isithombe-skrini sesibonisi se-Fomo esitolo esisebenzayo:
Ngokukhombisa ukuthengisa njengoba kwenzeka kusayithi lakho, unezinzuzo ezintathu kunezimbangi zakho:
Dala umuzwa Wokuphuthuma - I-Fomo ikhombisa ama-oda njengoba enzeka, okwenza isitolo sakho sibe yindawo ebukhoma ethokozisayo kanye nokwenza isenzo somthengi.
Amakhasimende Azizwa Eyingxenye Yesixuku - Ukuboniswa kwe-Fomo kufana nobufakazi besikhathi sangempela esitolo sakho - ukubona okunye ukuthenga kwakha ukuzethemba okusheshayo.
Ubufakazi Bomphakathi + Ukuthembeka - Amakhasimende angaba khona abona ukuthenga okwenziwa ngabanye - kunika ukuthembeka esitolo sakho nokwakha ukwethembana nomsebenzisi.
I-Fomo okwamanje ihlanganiswe ne-3Dcart, i-Active Campaign, i-Aweber, i-BigCommerce, i-Calendly, i-Celery, i-ClickBank, i-ClickFunnels, i-Cliniko, i-ConvertKit, i-Cratejoy, ijabule, i-Drip, i-Ecwid, i-Eventbrite, i-Facebook, i-Gatsby, Thola impendulo, Ukubuyekezwa kwe-Google, i-Gumroad, I-Hubspot, Infusionsoft, Instagram, Instapage, Intercom, Judgeme, Kindful, Izinketho, Magento, Mailchimp, Neto, Privy, ReferralCandy, Selz, SendOwl, Shoelace, Shopify, Shopper Approved, Squarespace, Stamped, Stripe, Teachable, ThriveCart, Trustpilot, Uhlobo, Unbounce, Universe, ViralSweep, Wix, Woo Commerce, WordPress, Yotpo, Zapier, Zaxaa, futhi bane-API.
Ungabona ukuthi imilayezo yakho ye-Fomo ikuthinta kanjani ukuthengisa kwakho. Omunye umsebenzisi we-Fomo wabelane ukuthi kungakapheli nenyanga ebone ukuthengiselana okungu-16 okukhonjwe ngqo kuhlelo lokusebenza ngamasayizi we-oda angaphezulu kwesilinganiso, okuholele ngaphezulu kwe- $ 1,500 yemali engenayo eyengeziwe. Lokho kuyimbuyiselo emnandi ekutshalweni kwethuluzi elibiza imali engange- $ 29 ngenyanga!
Qala Isivivinyo Sakho Samahhala Sesimemo Namuhla!
Tags: 3dcartUmkhankaso OsebenzayoAWeberI-BigCommerceikhalendaisilimo esidliwayo esinamagatsha anamanziclickbankChofozaFunnelsUClinikoGuqulacratejoyukwethembekaNgijabulileukuvuzaubufakazi be-ecommerce kwezenhlaloI-EcwidumcimbiFacebookUGatsbyThola impenduloizibuyekezo ze-googleI-Gumroadindawokhulisa ukuguqulwaInfusionsoftinstagramUkufakaintercomJajimeUnomusaAma-LeadPagesMagentoi-mailchimpNetoaziseukuthandaukuthunyelwaselzThumelaOwlShoelacethengashopify izengezothenga ama-pluginsshop amathuluziKuvunyelwe uShopperubufakazi bezenhlalakahlesquaeveraceKugxiweI-StripeIfundisweI-ThriveCartizinkomba zokuthembelaumabhebhanauhlobounbounceindawo yonkeI-ViralSweepWixwoo ukuhwebaWordPressYotpozapperZaxaa
Ukuqala ngamakhasi webhizinisi le-Facebook nokumaketha kwe-Facebook